2. Miaraka amin'ny fiasan'ny dimming manan-tsaina, dia afaka mahatsapa fa ny vatan'olombelona dia mihetsika araka ny famirapiratana napetraka aorian'ny fihetsiky ny vatan'olombelona ao anatin'ny faritra araha-maso.
3. Pure flameproof telo-lava-bato rafitra mitambatra, mety amin'ny entona mipoaka sy ny vovoka mirehitra tontolo iainana, tsara amin'ny fipoahana-porofo fampisehoana sy ny photometric fampisehoana.
5. Sarony mangarahara vera manify.Atomized anti-glare famolavolana, mahatohitra angovo avo fiantraikany, hafanana fusion, hazavana fampitana hatramin'ny 90%.
6. Teknolojian'ny herin'ny fiara mandroso, fidirana midadasika midadasika, miaraka amin'ny tsy tapaka, fiarovana amin'ny faritra misokatra, fiarovana amin'ny circuit fohy, fiarovana amin'ny fiakarana, sns.
7. Maro ny marika iraisam-pirenena LED modules, rafitra fizarana optika faharoa novolavolain'ny rindrambaiko optika matihanina, ny hazavana dia malefaka sy malefaka, ny vokatra maivana dia ≥120lm / w, ny lokon'ny loko dia avo, ny fiainana lava, ary ny tontolo iainana dia maitso.
8. Ny fantson-drivotra mandroaka hafanana misokatra dia mamoaka tsara ny loharanon-jiro sy ny hafanana famatsiana herinaratra mba hiantohana ny fiainan'ny jiro.
9. Ny teknolojia famehezana mandroso dia miantoka ny fampandehanana maharitra amin'ny fiarovana avo, tontolo mando.
10. Ny mekanika fanitsiana bracket natao manokana izay manitsy ny zoro fanazavana araka izay ilaina.
1. Mifidiana tsirairay araka ny fitsipika ao amin'ny hevitry ny modely voafaritra, ary ampio ny fipoahana-porofo marika aorian'ny hevitry ny modely voafaritra.Ny embodiment manokana dia: "modely vokatra - kaody famaritana + marika tsy misy fipoahana + habetsan'ny baiko".Ohatra, raha ilaina ny jiro fanamafisam-peo IIC 60W, ny isa dia 20 sets, ny baiko dia: "Modely: FCD63-Specification: F60Z+Ex d IIC T6 Gb+20″.
FCBJ andian-dahatsoratra Acoustic-optic fipoahana-porofo taona ...
Modely Implication Features 1. Die-cast aluminium firaka akorandriaka amin'ny static famafazana, endrika tsara tarehy.2. Buzzer ivelany, mafy sy lavitra.3. Misy stroboscope, afaka mampita hazavana fampitandremana lavitra.4. Ny mpitari-tafika anatiny dia tokony hotsindrian'ny OT terminals ary insulated amin'ny tanany, ary ny terminal dia hohenjanina amin'ny taila manokana anti-loose pad mba hiantohana ny fahamarinan-toerana ny herinaratra.5. Ⅰ rakotra mangarahara dia vita amin'ny tanjaka avo henjana...
Ny endri-javatra momba ny modely 1. Ny fefy dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny firaka aluminium mahery vaika indray mandeha.Ny ivelany dia nofafazana plastika tamin'ny alàlan'ny fanerena avo lenta taorian'ny fipoahana tifitra tamin'ny hafainganam-pandeha avo.Misy tombony vitsivitsy amin'ny fefy: rafitra mafy, fitaovana avo lenta, hery lehibe, fiasa tsara amin'ny fipoahana.Manana adhesion matanjaka amin'ny vovoka plastika izy io ary ny fampisehoana anticorrosive lehibe.Ny ivelany dia madio sy tsara tarehy;2. Casting mamorona, rafitra mirindra, beautif...
Modely Implication Features 1. Aluminum firaka maty-fanariana akorandriaka, ny ambonin'ny electrostatically sprayed, ary ny bika aman'endriny tsara tarehy;2. Ny radiatera dia mihinjitra avy amin'ny tensile aluminium firaka akora amin'ny avo mafana conductivity sy ny hafanana tsara dissipation vokany;3. Azo atao ny mifidy bracket na jiro eny an-dalambe mifandray amin'ny jiro ilaina amin'ny toerana samihafa, ary mora kokoa ny manamboatra sy manavao.4. Ny famolavolana jiro an-dalambe dia natao araka ny lalana roa amin'ny ...
Ny endri-javatra momba ny modely 1. Ny fefy quadrate dia vita amin'ny firaka aluminium.Izy io dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny firaka aluminium mahery vaika ho an'ny fotoana iray, izay manana hery avo, fiasa tsara amin'ny fipoahana.Ny ivelany dia nofafazana plastika tamin'ny alàlan'ny fanerena avo lenta taorian'ny fipoahana tifitra tamin'ny hafainganam-pandeha avo.2. Ny tranon-jiro dia vita amin'ny vera borosilicate avo miaraka amin'ny transmittance lehibe. Ny fasteners ivelany dia vita amin'ny vy tsy misy pentina.3. Mety manana fametrahana horizontally na fametrahana rindrina.Ahitsio amin'ny...
Modely Implication Features 1. Aluminum firaka maty-fanariana akorandriaka, ny ambonin'ny electrostatically sprayed, ary ny bika aman'endriny tsara tarehy.2. Izy io dia mampiasa fitaratra mangarahara borosilicate avo, rakotra mangarahara atomization ary famolavolana anti-glare, mahatohitra angovo mahery vaika, manohitra ny hafanana hafanana, ary ny fampitana hazavana dia hatramin'ny 90%.3. Stainless vy miharihary fasteners amin'ny avo harafesiny fanoherana.4. Teknolojian'ny herin'ny fiara mandroso, fidirana midadasika midadasika, miaraka amin'ny curr tsy tapaka ...